MAXIMA Nrụrụ Ọrụ Dị Iche Iche Platform buliri jiri usoro hydraulic vetikal na-ebuli elu pụrụ iche na njikwa njikwa ziri ezi iji hụ na mmekọrịta zuru oke nke hydraulic cylinders na iji bulie elu na ala. Ebugharị n'elu ikpo okwu dị na nzukọ, mezie, rụkwaa, gbanwee mmanụ ma sachaa ụgbọ ala azụmahịa dị iche iche (ụgbọ ala obodo, ụgbọ njem na etiti ma ọ bụ nnukwu ụgbọ ala).
Independent centralized akara usoro: otu ahụ nwere ike ibuli elu na ala n'elu ikpo okwu, sere ụlọ elu, na sekọndrị eweli. Ọ na-adị mfe ịrụ ọrụ na oru oma.
Ikpo okwu nwere ike ibuli elu na igbutu ihu na igbutu elu na ogo a kapịrị ọnụ. N'ebe kachasị dị ala, ọ dị mfe ịwụnye ma ọ bụ iweda ụlọ elu, nke otu onye ga-arụ.
Platform nwere ike ibuli ma gbadata n'akụkụ ma na-ebuli elu, nke na-eme ka ụdị ihe ọghọm dị iche iche banye ma pụọ ​​na ikpo okwu na-enweghị ebuli elu. Workingdị elu dị iche iche na-arụ ọrụ (375 ~ 1020mm) kwesịrị ekwesị maka ndị ọrụ dị iche iche.
Ikpokoro nke elu igwe nwere ike ime ikuku, nke na-eme ka ụdị ihe mberede ọ bụla banye na ikpo okwu na-enweghị ebuli elu.
MAXIMA Dent Puller ịgbado ọkụ Machine B3000
High-arụmọrụ transformer ana achi achi nke anụ ịgbado ọkụ.
Multifunctional ịgbado ọkụ ọwa na ngwa ekpuchi dị iche iche ọnọdụ.
Mfe ịgbanwe ọrụ.
Adabara ịrụzi dị iche iche na mkpa ogwe.
MAXIMA Universal ịgbado ọkụ Machine B6000
Ijikọta ịgbado ọkụ na ntụpọ na-agbatị
Mmetụta ịgbado ọkụ na-edozi ikpe dị iche iche
Kachasị ikuku jụrụ ana achi achi ogologo oge ịgbado ọkụ
Humanized imewe ana achi achi pụrụ ịdabere na ime ihe na elu arụmọrụ
Ọgụgụ isi ọgụgụ isi na-eme ka ọrụ dị mfe
Complete mpempe akwụkwọ metal idozi ngwa aka ịrụzi elu panel mfe.
MAXIMA Gas echebekwa ịgbado ọkụ Machine BM200
Atọ ịgbado ọkụ egbe na atọ ịgbado ọkụ osisi na-eme ka mma ojiji na elu arụmọrụ.
Mmepụta ike nwere ike ịgbanwe na uche.
3 PH Bridge rectifier na-achota arc welding.
PWM na-ekwe nkwa nri osisi.
Stick nri idu efe na-ike na ịgbado ọkụ igwe.
Nchedo ọkụ na-ekpo ọkụ na-eme ka ịgbado ọkụ.
MAXIMA Aluminium Isi Gas echebekwa ịgbado ọkụ Machine B300A
A nabatara teknụzụ Invert ụwa na DSP zuru oke nke ọma
Wgbado ọkụ parameters ga-setịpụrụ na-akpaghị aka mgbe ukpụhọde naanị otu oke
Operationzọ ọrụ abụọ: Ihuenyo aka na bọtịnụ
Emechi akaghị njikwa iji hụ na anụ Weld aak ogologo na nnukwu weld ike, ma zere nrụrụ
B80 Aluminium Isi ịgbado ọkụ Machine
Ọ dabara na ihe ọ bụla nwere akpaaka-ahụ gụnyere aluminom, alloy alloy, iron, copper.
Invert technology ana achi achi elu arụmọrụ, anụ na ala ọdịda ọnụego
Akwa arụmọrụ transformer ana achi achi pụrụ ịdabere na ịgbado ọkụ
Ejiri egbe na ngwa di iche iche kpuchie uzo di iche iche.
Mfe iji tọghata ọrụ
Adabara ịrụzi ọ bụla dị iche iche nke na mkpa panel deformation.
Dent Anam Udeme System
N'ime usoro mmezi ahụ nke onwe, ogwe osisi dị elu dị ka ibo ụzọ ụgbọ ala adịghị mfe iji rụkwaa ihe eji eme ihe ọdịnala. Car bench ma ọ bụ gas echebekwa ịgbado ọkụ igwe nwere ike imebi akpaaka-ahụ.
Nchekwa onwe-ahụ Elektrik n'ihe System
MAXIMA EMS III, sistemụ nha nke klaasị ụwa, dabere na teknụzụ ọgbọ ọhụụ ma ngwaike na ngwanrọ. Na mkpokọta ụgbọ ala ntanetị pụrụ iche n'ịntanetị (ihe karịrị ụdị 15,000), ọ dị mma ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ.